Moments Neshamwari 40
Copyright, 1912, neHW PERCIVAL.
Mhuka dzinobata mhuka dzinogara sei pasina zvokudya uye sezviri pachena isina mhepo panguva dzenguva refu dzekurota?
Hakuna mhuka yemhuka inogona kurarama isina chikafu. Iko kudiwa uye mabasa echikamu ndiwo anosarudza mhando yechikafu chinodiwa. Mhuka dzinovanda hadzigone pasina chekudya kana kazhinji chisina mweya, kunyange zvichidikanwa kuti vatore chikafu muzvinhu zvavo zvekugaya kuti varambe vari vapenyu panguva yekuzvivara kwavo. Mhuka dzinozvivirira dzine mapapu kazhinji dzinofema, asi kufema kwadzo hakuna zvakaringana kuchengetedza miviri yavo ichisangana nehupenyu hwayo maiyo ari pakadzika zvakanyanya ebb zvekuti mhuka dzinoita sedzisingafema zvachose.
Mhando dzemhuka nemaitiro adzo anorongedzwa zvinoenderana nemimwe mitemo yehupfumi yechisikigo kuitira kuchengetedza kwezvisikwa zvezvisikwa. Chikafu chakakosha kuchengetedza chimiro chemuviri wese, uye budiriro yemurume yakaita kuti zvive zvakafanira kuti kwaari sepane nguva panotorwa chikafu chinofanirwa kunge chiri chenguva pfupi. Munhu akajaira kudya kwake kwematatu kana anopfuura pazuva haanzwisisi kana kufarira kuti zvakaita sei kuti mhuka dziite mazuva kana mavhiki vasina chikafu, uye kuti vamwe vanogona kurarama munguva yechando vasingadye. Mhuka dziri musango dzadzo dzinoda zvakaringana kudya zvakaringana kupfuura munhu. Chikafu chinodyiwa nemhuka dzechisikigo kupa zvavanoda uye nekudaro murume wekudya anodyira kupa zvaanoda zvemuviri.
Asi chikafu chemurume chinofanirawo kupa simba rinodiwa kuitira chiitiko chehuropi hwake uye nezvaanoda. Zvinoenderana nehupfumi hwechisiko chinodyiwa nemurume anodya chinowedzera chitoro chake chesimba uye nekuwedzera simba rake. Kazhinji anodhonza masimba ake mukuwandisa kwemafaro. Izvo zvinopfuura zvakaringana izvo mhuka inodya kuti zvipe izvo zviripo zvinodiwa zvakachengetwa mumuviri wayo yakawanda semagetsi akawandisa, uye pane izvo zvinokwevera kana kupihwa kwechikafu chisina kukwana kune zvayaida.
Sezvo nguva yechando inoswedera, mhuka idzo dzinoratidzira kuwedzera mafuta uye dzakagadzirira kutanga kurara kwavo kwechando. Iko kutonhora kunobvisa chikafu chavo, kwosunungura pasi uye vozvikandira mumapadza avo. Ipapo ivo vanozora kana kuzvipeta pachavo munzvimbo iyo inochengetedza zvakanyanya kupisa kwavo uye inodzivirira kubva kunotonhora. Kufema kunodzora, huwandu uye hurefu hwekufema kunodzorwa kune huwandu hwemafuta anodiwa kuti urambe uchishanda murazvo wehupenyu. Chikafu chinoshandiswa hachizi zvino chekumhanyisa mhasuru, asi kupa chipenyu simba rinodiwa kuti ichengeteke yakakwana, kuburikidza nenguva yayo yakareba yekuora uye kurara. Chikafu ichi kana mafuta isimba rekuwedzera iro raanga akachengeta mumuviri wake muchimiro chemafuta uye rinovezwa panguva yekuzviviga maererano nezvinodiwa nemuviri.
Sezvo pasi parinoda kuenda kuzuva, nemwaranzi yezuva, panzvimbo yekubhururuka ichitarisa pamusoro sepasi sepanzvimbo yechando, ikozvino rova ​​zvakananga muvhu, wedzera masimba emagineti uye wotanga kupetwa uye kuyerera kwehupenyu mumiti. Simba rezuva rinomutsawo mhuka dzinovanda kubva pakurara kwavo, imwe neimwe zvichienderana nemhando yayo, uye sekupi kwayo chikafu chinogadzirwa nezuva.
Kutenderera kweropa kunoita kuti kufema kuve kwakakodzera nekuda kweiyo oxygen iyo inodiwa neropa uye neinowana kuburikidza nemapapu. Kuwedzera kufema kunokonzera kuwedzera kutenderera. Kutenderera kwacho kuri kuita sekufema nekukurumidza uye kwakadzika. Kuita kwemuviri kunoita kuti ropa rishande uye kutenderera kunoshanda kunowedzera huwandu hwekufema, zvese izvi zvinoshandisa simba rinopihwa nechikafu. Kusaita basa kwemhuka kunoderedza kutenderera kwayo. Mune mhuka inokatyamadza kutenderera kwayo kunodzikira kusvika kushoma uye kufema kwayo hakuna kuoma kana zvachose. Asi kune mhuka mune iyo iyo kutenderera nekufema inomira uye mukati mayo iyo mabasa emitezo akamiswa.
Ko mhuka ine mapapu inorarama isina kupfurikidza here? Kana zvakadaro, inorarama sei?
Dzimwe mhuka dzine mapapu dzinorarama pasina kufema. Mhuka dzakadaro dzinoramba dziri mhenyu nekumisa mashandiro emitezo inoda rubatsiro rwekudya uye nekuramba ichibata iyo nhepfenyuro iri mukati meiyo nehupenyu hupenyu hwezvisikwa, gungwa risingaoneki uye risingapfu muviri. Kazhinji kacho kana zvamboitika gore zvinopera izvo mapepanhau haapi zvimwe zvinongedzo nekuwanikwa kwemhuka iyo yakagara kwenguva yakakura pasina mukana wekufema kwayo. Kazhinji munyori wechinyorwa uyu ndewe kwenguva yekutanga akanzwa nezve chinhu chakadai senge icho chaanonyora, uye anogona kuchirondedzera sekutanga nyaya yerudzi rwacho pakarekodhwa. Sezvineiwo, kune akawanda akavimbika makesi akanyorwa, mumagazini zvine mukurumbira zvesainzi. Kwete mwedzi yakawanda yapfuura imwe yemapepa emangwanani akapa nhoroondo yekuwanikwa kunoshamisa kwakadaro. Bato revaongorori rakanga richitsvaga mimwe mienzaniso mukufarira kwesainzi. Vaive nemukana wekucheka nepakati pebwe. Mune imwe yekucheka kwavo dombo rakasimba rakavhurwa ndokuburitsa dhata raive rakamisikidzwa mune iro solid solid. Pakare ipapo Toad yakava chinhu chikuru chekufarira. Achiri kuzvitarisa, sezvo rakange rakamhara mukamuri raro diki raive rakamisikidzwa kwemazana emakore, mumwe webato akaridhonza kuti aone kana raive rakatsemurwa, uye cheuyu chakavashamisa vese nekubuda muguva. Nhengo yakataura nezvekuwanikwa kwayo yakataura kuti yakanzwa nekuverenga nyaya dzakadai, asi anga achingofungidzira mukana wavo kusvika azvionera chiitiko ichi. Panguva yemishumo, Toad yaive mupenyu uye yakagwinya. Pane imwe nguva yakataurwa nevanhu vane mukurumbira kuti pavakanga vachicheka rimwe dombo parutivi rwemugodhi wekare wemvura, sezvo dombo parinopatsanurana gondo rakaburitswa kunze, uye rakabatwa parakatanga kukambaira zvaro kusimuka.
Mhuka dzinowanikwa dziripamoyo dzakasungirirwa pakati pematombo, kana kuti dzakapinda musango, kana dzakakura kuva miti, kana yakavigwa muvhu, imhuka dzinovanda, asi izvo zvinomisawo mabasa epamoyo nekudimbura kupi kwemhepo. uye panguva imwecheteyo gura kubatana kwepanyama nedzimwe nzvimbo dzenzara uye uise ivo mune etheric kusangana. Izvi zvinoitwa nekukwevera rurimi kumashure muhuro nekuzadza ndima yemweya nerurimi. Rurimi rwakadaro rwakatenderedzwa rwuchisundira mukati meanomira nekumisa mhepo yemhepo kana trachea pamagumo ayo ekumusoro. Rurimi nokudaro runoshanda zvinangwa zviviri. Inobata mhepo yemhepo, uye nokudaro inodzivirira kufamba kwemhepo mumapapu, uye, nekudaro yakaiswa, inogadzira bhatiri mairi iro hupenyu hwazvino huchiyerera kupinda mumuviri chero bedzi dunhu richinge rakachengetwa rakavharwa. Kana mhepo yemhepo ikavharwa kubva kumapapu, ropa harigoni kunzwiwa; oxygenation yeropa rinopera; pasina kuisira ropa nhengo dzemitezo hadziite basa radzo. Kazhinji pasi pemamiriro ezvinhu aya rufu runotevera, nekuti iripo yemweya wekufema yakaputswa, nepo mweya uchifanirwa kuchengetwa uchitsvaira kuti michina yemuhupenyu irambe ichimhanya. Asi kana mweya wekugurika ukabviswa kubva mumapapu, kubatana kusinga pfuure kupfuura kufema kunoitwa pakati pemuviri wenyama nehupenyu hwegungwa, muviri wenyama unogona kuchengetwa uri mupenyu chero bedzi kubatana nehupenyu kuchigadzirwa uye nemuviri uchiramba nyarara.
Chero bedzi marimi achichengetwa munzvimbo yakatsanangurwa, mhuka yacho ichararama; asi haigoni kufamba, nekuti kufema mweya kunokosha kuitira chiitiko chemuviri, uye haugone kufema apo rurimi rwayo ruchimira mhepo yarwo. Kana rurimi ruchinge rwabviswa kubatana nehukama hwacho kuyerera kwehupenyu hwaputswa, asi hupenyu hwenyama hwazvino hunotanga nekuita kwekufema.
Kunze kwekuti mahede nemazizi akawanikwa ari mupenyu mudombo rakasimba, kufungidzira kwakawanda kwave kuchiiswa mukati, nezvekuti sei, zvisina tsarukano, vakasvikako. Panyaya yekuti toad kana bundu raigona kunge rakasungirirwa dombo, zvinotevera zvinogona kupa nzira mbiri munzira dzinoverengeka.
Kana chisikwa chikawanikwa mudombo remvura chakaumbwa neRwizi rwizi, zvinokwanisika kuti, nenguva yekusagadzikana kwemuviri, mvura yakasimuka ikaifukidza uye kuti pakanga paine deposits kubva kumvura inogadzika yakakomberedza chitunha akaisunga. Kana mhuka ikawanikwa muibwe yegneous chibviro, zvinokwanisika kuti nepo iri mukati mayo munyama, yakamira munzira uye yakafukidzwa nepamhepo nerukova runotonhora rwedombo rakanyungudika ichiyerera ichibva mudondo. Vanoramba vanogona kuitwa kuti hakuna cheki kana bundu rinogona kuramba ririmo mumvura kwenguva yakareba uye richitambura mumadhizaini kuti riunganidze mune huwandu hwematombo pamusoro pazvo, kana kutadza kumisa kupisa uye uremu hwebwe rakanyungudutswa. Izvi zvinopesana zvicharasikirwa nehukuru hwazvo kune iye anga achicherechedzwa maitiro ema toads uye madhiri, kana achinge arangarira kupisa kwakanyanya kwavanoratidzika kunakidzwa, uye kana zvichinzwisiswa kuti nepo munyama uchinyura uye uchisangana neyakavanzika. yehupenyu, ivo havana kukodzera kune mamiriro emuviri uye kunzwa.
Sayenzi inoziva mutemo upi umo munhu anogona kurarama asina kudya uye mweya; kana zvakadaro, varume vakadaro vakararama, uye mutemo chii?
Maererano nesainzi yemazuva ano hapana mutemo wakadai, nekuti hapana mutemo wakadai unozivikanwa kune sainzi yemazuva ano. Kuti murume anogona kurarama kwenguva yakareba pasina chikafu uye mweya haubvumidzwe nesainzi. Hakugone, maererano nesainzi, kuve chero mutemo unobvumidza murume kurarama pasina chikafu nemweya, humbowo hwese zvisinei, kusvika sainzi yaumba mutemo uye nekuibvumira zviri pamutemo. Zvakadaro, vanhu vakagara kwenguva yakareba, vasina chekudya uye chakabviswa kubva kumhepo, maererano nezvapupu zvakavimbika, uye zvichishambadzirwa muzvinyorwa zveveruzhinji. MuIndia mune marekodhi mazhinji munguva dzazvino, uye maakaunzi uye ngano zvichidzoka mazana emakore, zve yogis uyo nekuda kwehumwe hunhu akakwanisa uye akamisa kuita kwemuviri uye kuramba asina mweya kwenguva yakareba. Anenge chero muHindu akambonzwa nezvake kana kupupurira chiitiko chakadai. Imwe yenyaya dzakadai inoshanda kuratidza.
Kuti aratidze kuti munhu anogona kuwana masimba anoshamisa anowanzoonekwa kunge angagone, mumwe wechiHindu yogi akapa humbowo kuna vamwe vakuru veChirungu kuti aigona kurarama kwenguva yakareba asina chikafu kana mweya. MaRungu akatsanangura mamiriro ebvunzo, ayo akagamuchirwa, zvichinzwisiswa zvisinei kuti hapana mumwe kunze kweiyo yogi's chelas, vadzidzi, vanomugadzirira dambudziko uye kumutarisira mushure maro. Panguva yakatarwa kuungana kwakakura kwevanhu vakaungana kuzopupurira kushamisika kuri kuda kuitwa. Yakapoteredzwa nevateereri vake vazhinji, iyo yogi yakagara mukufungisisa kusvikira vadzidzi vake vaaipinda vakaona imwe shanduko ichiuya pamusoro pake. Vakabva vamuisa pakureba mubhokisi raive rakafukidzwa uye voiswa mune inoiswa mubhokisi. Chifukidziro chekasiketi chakaiswa uye hermetically chisimbiso uye chakaiswa pamusoro pemamita matanhatu muvhu. Pasi rakazokandwa pamusoro pechikapu, uye huswa hwakadyarwa pamusoro pawo. Mauto airamba achingotenderedza nzvimbo, yaive zvekare nzvimbo yekukwezva vashanyi. Mwedzi yakapfuura, huswa hwakakura kuva sod rinorema. Panguva yakatenderana pamapato ese aivapo, uye vateereri vaive vakakura, sezvo nhau yekushamisika yakanga yapararira kure. Uswa hwainyatsoongororwa pamwe nekugutsikana. Iyo sod yakatemwa mukati ndokubviswa, pasi yakavhurika, leaden casket yakasimudzwa, zvisimbiso zvakaputswa uye chifukidziro chakabviswa, uye Yogi akaonekwa akarara sezvaaive aiswa. Akabviswa neruremekedzo. Vadzidzi vake vakamubvisa makumbo, nekushandura meso ake netembere, vakamubvisa, akasuka rurimi rwake. Nenguva isipi kufema kwakatanga, kurira kwepasi, kurira kwakabudiswa kubva pahuro paYogi, maziso ake akatenderera uye akavhurika iye ndokugara kumusoro akataura. Musiyano chete muYogi ndewokuti akaonekwa aine hukasha kupfuura panguva yekupindirana nekuvigwa. Mhosva iyi inonyorwa mune imwe yemishumo yehurumende.
Vaya vanozviti vanoziva tsika dzakakodzera kuti vapinde mumamiriro ekunze akadaro, vanotaura kuti Yogis vanozvigadzirira nedzimwe nzira dzekufema uye nekurapa kweumwe rurimi nehuro. Izvo zvinotaurwa navo uye zvakare zvinotaurwa mumabhuku ane chekuita nenyaya ye "Yoga," kuti nekufungisisa uye kurovedza muviri mukufema, kufema mweya uye kuchengetedza mweya, mashandiro emitezo yemuviri anogona kumiswa uye muviri uchiri kuchengetwa uri mupenyu . Izvo zvinonzi zvinodikanwa kuti munhu angapinda mukukasira kwenguva refu kuti akwanise kufambisa rurimi rwake mumutsipa wake. Kuita kuti izvi zviite mumuviri zvinokwanisika, zvinonzi chinzwano pakati pejaya repasi nerimi chinofanira kuchekwa kana kupfekwa. Ipapo iyo yaizove Yogi inofanirwa kudhonza-kana icho chinonzi "mukaka" - rurimi rwake kuitira kuti rwutambanudzwe kune urefu hunodiwa pakuvhiya. Mudzidzisi wake anomuratidza sei.
Kunyangwe kana idzo mhando dzeYogis dzakadzidza kutevedzera mhuka dzinovandika uye kutevedzera masikirwo ezviripo zvemamwe mhuka, zvakadaro mamiriro ezvinhu nemaitiro akafanana, asi izvo izvo Yogi inoshayikwa mune yakasarudzika masimba anowana nokudzidzira, kana nzira yekunyepedzera. Rurimi rwekiad kana nzou inoda kuti isashanda kuti iipe hurefu, uyezve mhuka idzi hadzidi kudzidzira kufema kuti dzibatanidze pamwe nekuyerera kwemukati kwehupenyu. Mwaka nenzvimbo zvinotaridza kuti zvichabatwa riini. Izvo izvo mhuka inogona kuita nekuzvarwa nahwo, munhu anogona zvakare kudzidza kuzviita. Musiyano ndewekuti murume anofanirwa kupa nepfungwa, izvo zvaanoshaya nemasikirwo.
Kuti munhu arambe ari mupenyu asina kufema anofanira kuita hukama nemweya wake wepfungwa. Kana mweya wake wepamoyo uchifamba kufema kwake kwemuviri kunomira. Iwo mweya wepamoyo dzimwe nguva unokonzerwa nekusaziva nemafungiro epfungwa kana kuvhiringidza, kana kuti inogona kuvezwa nemagineti kana pfungwa yemumwe, sepasina simba remagineti kana hypnotic trance. Kana murume, zvake achida, achipfuura mudunhu maanogara asina kufema anozviita nevamwe vakadaro muviri uye nekufema muviri sekutsanangurwa kana, kunze kwekufema kwechisikigo, pasina kufamba kwomuviri chero. Muchiitiko chekutanga anoita kusangana nemweya wake wekufema kubva mumuviri wake wepanyama uri pasi. Muchiitiko chechipiri anorondedzera kufema kwake kwepamoyo kune yake yepanyama kubva mundangariro dzake pamusoro. Nzira yekutanga iri kuburikidza nemanzwiro, yechipiri ndeyepfungwa. Nzira yekutanga inoda kuvandudza kwekunzwa kwemukati, yechipiri nzira inopedzwa kana munhu akadzidza mashandisiro ake euchenjeri, akasununguka pane dzake pfungwa.
Mazhinji mamakisi ezvinhu uye anopfuura muviri mumwe anopinda mukuvakwa kwemunhu. Imwe neimwe yemiviri yake kana giredhi rechinhu rinopihwa kubva pasiri nyika kubva pariri. Asi iyo huru yehupenyu inowanikwa kuburikidza neimwe yemiviri iyo inotamisa hupenyu kune vamwe. Kana iyo hupenyu hwehupenyu hunotorwa kuburikidza neyemuviri inoshandiswa uye inoendeswa kune psychic. Kana iyo huru yekutanga ichiuya kuburikidza ne psychic iyo inodudzira kuenda uye inoramba iri mhenyu. Mutemo ndewekuti munhu anogona kuchengetedza muviri wake ne mweya waanokwanisa kuupa.